Japanese crypto vanoita aigona utarisane 55% mutero pamusoro Purofiti - Blockchain News
Japanese crypto vanoita aigona utarisane 55% mutero pamusoro Purofiti
Japan National Tax Agency rakatonga gore rapera kuti guta anowana pamusoro cryptocurrency zvakaenda muri rudzi “zvakasiyanasiyana mari,” vanoita vava kunodiwa kuzivisa mari yavo pagore mutero mafufu yakafanira Feb. 16-Kurume 15.
Kusiyana winnings pamusoro mumatanda uye dzimwe mari, izvo kunonyorwa kumativi 20 muzana, Japan kuti vechibharo pamusoro purofiti kubva chaivo mari anomhanya kubva 15 muzana kusvika 55 muzana. The pamusoro mari zvinoshanda kuvanhu vane wepagore mari 40 miriyoni Yen ($365,000).
With hapana guta achawana mutero pamusoro refu upfumi mune chaivo mari mune dzimwe nevatongi kusanganisira Singapore, tsama cryptocurrency-vapfumi vanoita kare akasiya Japan, akati Kengo Maekawa, mukuru mukuru Shiodome Partners Tax Corp.
The kwemari-kumutsa zvinogona kuti hurumende Japanese aigona kuva kunokosha. Mumakore mwedzi pamusoro 40 muzana zvokutengeserana zvose muna Bitcoin kwave pamusoro Yen.
Panguva iyi, mutero sangano iri riri kutanga mashoko mujinga pamusoro cryptocurrency vanoita uye zvikwata kwakavakirwa muTokyo uye Osaka vari tiine pedyo yokurinda yemagetsi zvokutengeserana.
Russian yenyukireya masayendisiti zvasungirwa kushandisa supercomputers kuti cryptocurrency yangu
Russian chibatiso kure ...
Germany haazorambi kwairamba Bi ...
Previous Post:Thailand kuti mari gurukota: Hurumende haazorambi kurambidza cryptocurrency wokutengesera
Next Post:Cryptocurrency Exchange BitGrail inozivisa insolvency pashure Hack